Sida loola wadaago sawir fariin qaas ah barta Instagram | Androidsis
Waa suurtagal in daqiiqad cayiman fiiri farriin barta Instagram ah oo aad u malaynayso inay danaynayso mid ka mid ah dadka aad la xiriirto. Haddii aan markaa dooneyno inuu qofkaasi arko sawir la sheegay, dalabku wuxuu na siinayaa suurtagalnimada inaan kula wadaagno qaab fariin gaar ah. Nidaam aad u raaxo leh, kaas oo u oggolaanaya qofkaas inuu qaabkan ugu helo qaab fudud.
Hadday daqiiqad tahay waxaad dooneysaa inaad la wadaagto sawir fariin gaar ah shabakada bulshada, dhibaato malaheysid. Marka xigta waxaan ku tusi doonaa talaabooyinka ay tahay inaan raacno si aan u awoodno.
Markii aan helnay daabacaadda / sawirka su'aasha ah ee aan rabno inaan wadaagno, waa inaan eegno astaamaha ka muuqda hoostiisa. Waan arki doonaa in astaamaha lamidka ah iyo astaamaha faallooyinka ay soo muuqdaan, oo iyaga ku xigta ayaa ah midka na xiiseynaya. Waa astaan ​​u eg diyaarad warqad ah xagga foomka, mahadsanid taas oo aan la wadaagi doono daabacaadda la sheegay.
Sidaa darteed, waxaan gujineynaa calaamaddan oo dariishad cusub ayaa furan, taas oo waa inaan helnaa xiriirka aan rabno inaan fariin gaar ah ugu dirno, oo leh sawir la sheegay. Waxaan markaa raadineynaa qofkaas ka dibna waxaan garaacey badhanka dirista. Kadib waxay noo oggolaan doontaa inaan ku dhammaystirno farriinta xoogaa qoraal ah, haddii aan rabno, waana soo diri karnaa hadda.
Codsigu wuxuu noo ogolaanayaa inaan wadaagno sawirkan dhammaan dadka aan dooneyno, laakiin waa inaan ku darnaa dhammaantood mid mid. Laakiin waa suurtagal in lala wadaago wax ka badan hal qof, haddii ay dhacdo inaad tixgeliso daabacaadda la sheegay inay daneynayso dhowr ka mid ah dadka aad la xiriirto.
Sida aad u jeeddo, la wadaag sawir fariin gaar ah shabakada bulshada ee caanka ah runtii waa wax fudud. Tallaabooyinka la raacayo waa kuwo aan dhib lahayn oo waxba kama qaadayso.
Casharrada kale ee xiisaha leh:
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo wadaago sawir fariin gaar ah barta Instagram